Djibouti oo war ka soo saartay goaankii guddiga xaqiiqo raadinta ee Somalia iyo Kenya | Berberanews.com
Home WARARKA Djibouti oo war ka soo saartay goaankii guddiga xaqiiqo raadinta ee Somalia...
Djibouti oo war ka soo saartay goaankii guddiga xaqiiqo raadinta ee Somalia iyo Kenya
Djibouti-(Berberanews)-Qoraal ka soo baxay Wasaarradda Arrimaha dibadda Jamhuuriyada Jabuuti ayaa lagaga hadlay go’aankii ka soo baxay guddigii xaqiiqo raadinta Urur gobolleedka IGAD uu ka soo saaray muranka dowladdaha Soomaaliya iyo Kenya.
Qoraalka ayaa lagu sheegay in go’aanka ay soo saareen guddiga uu ahaa mid loo fuliyay si dhaxdhaxaadnimo ah kaasoo jawaab u ahaa eedeyn uga timid dhinaca Soomaaliya oo go’aankaa ku tilmaamtay mid hal dhinac ah.
Sidoo kale Jabuuti ayaa sheegtay in howlasha guddigan ay ku timid kaddib go’aan ay sidaa ku gaadheen madaxda urur gobolleedka IGAD iyo ruqsad laga heystay labada dowladdood ee Soomaaliya iyo Kenya.
Jawaabta Jabuuti ayaa imanaysa xili dowladda Soomaaliya ay ku eedeysay guddiga in ay warbixintooda ku saleeyeen oo kaliya xigashada hal dhinac oo ah Wasiirka Difaaca Kenya, taasoo ah mid aan lagu kalsoonaan karin.
Previous articleSaylici oo ka qaybgalay aas qaran oo loo sameeyay Xaaji Xaamud Jibriil
Next articleKaalinta Muwaadinku ku leeyahay Horumarinta dalka